Trinite Sy Tobago: Mibilaogy Zavakanto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 14:07 GMT
(Marihina fa tamin'ny 25 Septambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Raha miroborobo ny tontolon'ny bilaogy miteny Anglisy Karaibeana dia mitombo tahaka izany ihany koa ny isan'ireo bilaogy miresaka lohahevitra manokana. Tato anatin'ny roapolo taona izao, Trinite no toerana lehibe ho an'ny zavakanto maoderina ao Karaiba, izay mifaninana amin'ireo ivontoerana malaza kokoa any Kiobà sy Jamaika, na dia tsy mitovy aza ny fifantohan'ny iraisampirenena. Saingy nanomboka nanangana fisiana manan-danja ho an'ireo mpanakanto ao amin'ny nosy sy ireo ivontoeran-javakanto antserasera manerana an'izao tontolo izao ny fielezan'ny bilaogin'ny zavakanto Trinidadiana vao haingana .
Efa elaela ihany no nanokatra tranonkala ireo mpanakanto Trinidadiana vitsivitsy toa an'i Edward Bowen sy ny trano fampirantiana ara-barotra toy ny 101 Art Gallery , saingy vao roa taona izao no nivoahan'ireo bilaogera mpanakanto voalohany. Mandrindra ny gazetin'ny SXspace, tranonkala iray hiresahana momba ny sanganasan'ny mpanakanto Karaibeana i Christopher Cozier, iray amin'ireo mpanakanto maoderina malaza amin'izao fotoana izao any Karaiba, sady mpikambana ao amin'ny fikambanana Small Axe ihany koa. Nanomboka namahana bilaogy, Visual Matters , ihany koa izy tamin'ny volana Aprily 2006. Ny lahatsorany , hatramin'izao dia ahitana sariitatra mampihomehy namboarina ho an'ny asakanto izay niomanana hatao fampisehoana tao Canada, sy fanadihadiana lahatsoratra iray momba ilay mpandinika Trinidadiana Lloyd Best.
Nampiasa ny tranonkalany ilay mpanakanto teratany Irlandey, Mary Adam, izay mipetraka ao Trinidad nandritra ny telopolo taona, mba hampiantranoana antserasera ny fampirantiana sary ny sanganasany, ary nanomboka bilaogy iray mitokana iray izy vao haingana miaraka amin'ny “sary namboarina sy sary hafa, ny ahy sy ny an'ireo olon-kafa, tranainy sy vaovao, tsara sy ratsy, misy na tsy misy lahatsoratra , ho toy ny fanombohana ho an'ny zavatra hafa, izay mety na mety tsy hitranga “. Nanomboka ny adihevitra momba ny “fikasan'ny mpanakanto” sy ny andraikiny amin'ny fanehoana ny asakantony ny lahatsoratra iray vao haingana.
Nampiasa ny bilaoginy i Richard Bolai sy Adele Todd avy ao amin'ny The Bookmann mba hijerena ilay antsoin'izy ireo hoe “Trinidad Aesthetic © 1997″ amin'ny alalan'ny lahatsoratra fanadihadiana fohy momba ny “zavakanto, ny sary hosodoko, ny maritrano, ny afisy, ny typografia, ny haibika, ny graffiti an-dalambe, ny fahitalavitra , ny sarimihetsika ary ny sary kisoritsoritra hafa mifototra amin'ny tontolo iainana “izay matetika toa mitsikera ny sanganasan'ireo mpanakanto hafa. Ary nampiasa ny bilaoginy Now Is Wow ho toy ny gazety antserasera na ilay lazainy hoe ny “vavahadin-tserasera famoronana mivoatra isan'andro” ilay mpanakanton'ny haino aman-jery marolafy Elspeth Duncan.
Iray amin'ireo manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny zavakanto ao Trinite ny Zavakanto Maoderina Karibeana, fikambanana iray tsy mitady tombontsoa izay “miara-miasa amin'ireo mpanakanto mpanao sary maoderina, mpikarakara mozea, mpanoratra, mpahay tantara ary mpanabe zavakanto avy any Karaiba sy avy any ampielezana Karaibeana mba hampiranty, hamoaka ary hanadihady ny fampiasana zavakanto ao amin'ny faritra, ny fiantraikany sy ny heviny”. Mamoaka ny vaovaony isam-bolana, Art Papers ny CCA amin'ny endrika bilaogy, izay manambara vaovao momba ny fampisehoana hoavy sy ny fonenan'ny mpanakanto. Ary nanome ny fanohanana avy amin”ny ivontoerany ho an'ny fandaharanasany momba ny zavakanto maoderina vaovao Galvanize ny CCA izay natomboka tamin'ny volana Septambra 2006 ary nanapa-kevitra ny hametraka ny fanatrehany antserasera amin'ny endrika bilaogy. Mirakitra ny mombamomba ireo mpanakanto mpandray anjara, mpiangaly mozika ary mpanoratra, miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fandaharam-potoanan'ireo hetsika ny bilaogy Galvanize, ary hampiantranoina ao amin'ny Flickr ny fampirantiana sary antserasera Galvanize, miaraka amin'ny ankamaroan'ireo sary eo ambany lisansa Creative Commons. Farafahakeliny iray amin'ireo mpanakanto Galvanize, Jaime Lee Loy, no nanomboka ny bilaoginy manokana miaraka amin'ny fanazavana sy sary avy amin'ny tetikasany Unease: An 8-Step Programme.